Tsy hametra-pialana ny minisitry ny fampianarana ambony: tsy hofoanana, tsy haverina ny fanadinana bakalorea | NewsMada
Tsy hametra-pialana ny minisitry ny fampianarana ambony: tsy hofoanana, tsy haverina ny fanadinana bakalorea
Par Taratra sur 05/10/2019
Manoloana ny resabe sy ny savorovoro nateraky ny fiparitahan’ny laza adina bakalorea, nanambara, omaly, ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny Pr. Blanche Nirina Richard fa tsy hisy ny fanafoanana ary tsy haverina ny fanadinana bakalorea. Nilaza ny tsy hametra-pialana ny tenany.
Tsy fandraisana andraikitra ny fametraham-pialana izay takin’ny olona amin’ny minisitra raha ny fanehoan-keviny, omaly, tetsy Tsimbazaza. Tsy maintsy hanohy hatramin’ny farany ny fanadinana ny minisitera sy ireo tompon’andraikitra, raha ny nambaran’ny minisitra Blanche Nirina Richard ihany. Etsy andaniny, karazan’ny namaly ny Seces Rtoa minisitra, omaly, raha nanambara fa tsy hisy ny fanafoanana na famerenana iny fanadinana bakalorea teo iny, na teo aza ny tsy fahatomombanana sy tsy fifehezan’ny tompon’andraikitra ny andraikiny.
Be dia be mila tsy hisy fiafarany ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa, indrindra any anatin’ny tambajotran-tserasera Facebook any, mikasika ity raharaha bakalorea ity. Ankoatra ny ankizy mpiadina, nilaza sy naneho ny heviny ny ray aman-drenin’ny mpianatra. Mahatsiaro tena ho maty antoka ireo mpianatra nandany ron-doha nandritra ny taona raha hofoanana ity fanadinana ity.
Torak’izany ireo ray aman-dreny izay lany fatotra amam-pondrana nampianatra ny zanany kanefa ho very momoka ihany izany rehetra izany.
Etsy an-daniny anefa, milaza ny heviny ireo mpampianatra mpikaroka fa mampirefarefa ny lentan’ny diplaoma bakalorea hidirana eny amin’ny oniversite izao zava-nitranga izao. Ho ratsy laza ireo mpianatra hitondra izany diplaoma, amin’ity taona ity, izany.
Hisy akony hatrany amin’ny fitadiavan’asa ho an’ireo mpianatra ireo izao amboletra ataon’ny fanjakana izao satria tsy horaisin’ny orinasa ireo tanora rehefa tonga amin’izany sehatry ny asa izany noho ny gaboraraka nanomezana ny diplaoma.
Notanana ny talen’ny Ofisin’ny bakalorea Antananarivo
Anisan’ny tompon’antoka amin’izao fivoahan’ny laza adina alohan’ny fotoana ho an’ny fanadinana bakalorea izao, araka ny nambaran’ny minisitra, ny talen’ny ofisin’ny bakalorea, eto Antananarivo. Nomarihin’ity minisitra Blanche Richard koa fa tendren’ny filohan’ny oniversite io tale io. Tsy maintsy hosoloina, araka izany, io talen’ny ofisin’ny bakalorea io.
Amin’ny minisitra, fanakorontanana ity famoahana laza adina aloha loatra ity. Tsy kolikoly na fitadiavam-bola no nitranga fa fisomparana sy fanakorontanana mihitsy izay niainga tamin’ny tompon’andraikitry ny ofisin’ny bakalorea.
Mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Tazomina hanaovana ny fanadihadiana ihany koa ny proviseur-n’ny lisea Imerintsiatosika. Efa nilaza ny loharano nivoahan’ny laza adina izy, saingy mbola tsiambaratelon’ny fanadihadiana izany hatreto, raha ny fanazavan’ny minisitra hatrany. Hanaovana fanadihadiana ihany koa ireo mpianatra niray tsikombakomba taminy.